About Us - Gaomi Ruigu Labour Protection Co., Ltd
izihlangu Higher-kunqunyulwa zokhuselo
izihlangu Lower-kunqunyulwa zokhuselo
Shandong Gaomi Ruigu sixhobo ukhuselo yabasebenzi Imboni ishishini ezaziwayo-kakuhle iingcali kwimveliso nokuthengiswa weembadada ukhuseleko lwabasebenzi kunye zandla, le mveliso bekusoloko babelandela ingqiqo ulawulo ezintsha umgangatho kunye nokhuseleko. Kuye ukuphuhlisa nokukhula kukhuphiswano kwimarike bungwanyalala, kwaye iye yaphumelela izimvo elungileyo nendumiso lwabathengisi ezininzi nabathengi.
efektri yethu ikakhulu ukuvelisa Ruigu brand sombane protection yabasebenzi. Ezi mveliso epheleleyo, kwaye iimveliso eziphambili zezi ngomsonto phezulu, inaliti, series abandayo incangathi, iyonke kwiintlobo ezingaphezulu kwama-60, Obusemagqabini ubunjani, ukusebenza ophezulu. Iimveliso ze-mveliso wethu, kuxhomekeka kolu shishino kunye uhlobo lomsebenzi, sebenzisa izixhobo ezahlukeneyo neenkqubo ukuhlangabezana neemfuno zonke iintlobo iimeko zokusebenza ezimbi.
Chen Jianhua, umphathi jikelele, yamkela abathengi abatsha nabadala kukubonisa ngenxalenye inkqubo kunye ulwenziwo ubunzima iintlobo ezahlukeneyo, Sizimisele ukusebenza yimveliso ekumgangatho ophezulu inkonzo ekumgangatho ophezulu, ukulungele ukubambana zonke iinkalo zobomi ukwenza i entsha kwizinga eliphezulu kunye nendawo ekhuselekileyo.
Hou Zhang Lu e Chaoyang Development Zone, Gaomi City, Shandong kwiPhondo, China